wTVision ပနားမားရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း Augmented Reality Work အတွက် Ultimatte အပေါ်မှီခိုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » wTVision ပနားမားရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းတိုးပွားလက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် Ultimatte အပေါ်မှီခို
wTVision ပနားမားရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းတိုးပွားလက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် Ultimatte အပေါ်မှီခို
Fremont, CA - သြဂုတ်လ 13, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ Ultimatte ၎င်း၏အစစ်အမှန်အချိန် Processor ကိုပေးသည်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, ပနားမားရဲ့ 2019 မူလတန်း, လွှတ်တော်နှင့် TVN အပေါ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲများအတွက်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း (AR) ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြည့်စုံဂရပ်ဖစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတိုးပွားအဖြစ်မှန်များအတွက် wTVision နေဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကို ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို HD အသက်ရှင်နေထိုင်ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်နှင့်ပိုပြီးလည်းအမှန်တကယ်အချိန်ရလဒ်များကို, ပရိုဂျက်နှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်လမ်းအတွက်ရွေးကောက်ပွဲ၏နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုဖေါ်ပြခြင်း, တိုင်းပြည်အကြောင်းကြားထားရှိမည်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
TVN, ပနားမားအခြေစိုက်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက် wTVision ကြောင့်ထိုလယ်၌ wTVision ရဲ့ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံ၏ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်ဂရပ်ဖစ်, AR နှင့်ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့်အတူပူးပေါင်း။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမျိုးစုံရုံးများနှင့်အတူ wTVision ရဲ့ကိုလံဘီယာအခြေစိုက်အဖွဲ့ကစီမံကိနျးအတှကျရှေးခယျြထားနှင့်၎င်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့လိုအပျခဲ့သညျ Blackmagic ဒီဇိုင်း ရွေးကောက်ပွဲထုတ်လွှင့်ရာပနားမားအတွက်စတူဒီယိုမှကိုလံဘီယာအတွက်၎င်း၏ရုံးကနေလုပ်ငန်းအသွားအလာ။
"ကျနော်တို့ TVN ရဲ့စတူဒီယိုကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသည်သောကြောင့်, ကျနော်တို့ကသူတို့လက်ရှိကင်မရာများနှင့်အလင်းရောင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရတယ်," Jorge Kossowski, wTVision မှာကိုလံဘီယာများအတွက်စီးပွားဖြစ်မန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကသူတို့အပေါ်မှာထိန်းချုပ်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ငါတို့အားတစုံတခုသောမှောင်မိုက်အရိပ်နဲ့အလင်းအမှောင်မူမမှန်ပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ Ultimatte ရဲ့ chroma သော့ရေးအတွက်။ ကျနော်တို့အစုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောကင်မရာများနှင့်အတူအစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာစာအတွက်တင်ဆက်ပစ်ခတ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကကင်မရာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရှုထောင့်ကနေနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားကြည့်နှင့်အတူအစိမ်းရောင် screen ကိုဖမ်းမိ။ Ultimatte နှင့်အတူကျနော်တို့ထုတ်လွှင့်ဖြတ်ပြီးပုံရိပ်အရည်အသွေးတသမတ်တည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ foreground နှင့် background color ကိုထိန်းညှိဖို့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ "
မဲပါလီမန်ထဲမှာအမတ်နေရာများအတွက် running ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့ရေတွက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ပင်, wTVision ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အတွက်အမျိုးမျိုးသောထိုင်ခုံကိုယ်စားပြုနေတဲ့ "အဖြူရောင်ထိုင်ခုံ" ဂရပ်ဖစ်အတွက်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်အနိုင်ပေးရုပ်ပြ။ တစ်ခုချင်းစီကိုထိုင်ခုံရဲ့ဆုရှင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်သကဲ့သို့, ဂရပ်ဖစ်အနိုင်ရပါတီတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သီးခြားအရောင်မှပြောင်းလဲသွားတယ်။
"ကျနော်တို့ကကြည့်ရှုနားလည်ရန်အဘို့အလတ်ဆတ်ပြီးလွယ်ကူခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုဖန်တီးချင်တယ်။ ထိုင်ခုံနှင့်အတူရလဒ်တွေကိုပြသခြင်းဖြင့်ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုပြသနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်တခါတရံမှာကိုယ့်နံပါတ်များကိုကြည့်, လွှမ်းမိုးသောနှင့်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ Ultimatte နှင့်အတူကျနော်တို့ပုံရိပ်ယောင်များအတွက်ရောနှောနေခြင်းနှင့်ပျောက်ကွယ်သွားသို့မဟုတ်ထပ်တူစရာမလိုဘဲက virtual အစုံပေါ်တွင်ထိုင်ခုံ layer အားနိုငျခဲ့ကွ, "Kossowski ရှင်းပြသည်။
အလားတူပဲသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေအဘို့, wTVision ပနားမား၏အဖြူရောင်မြေပုံကိုဖန်တီးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမြို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်မဲနေရာယူသကဲ့သို့, မြို့ကိုယ်စားပြုမြေပုံပေါ်တွင် icon ကိုအနိုင်ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သီးခြားအရောင်ထင်ဟပ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။
ရလဒ်တွေကို လာ. အမျှ "ကျွန်တော်တို့ဟာမှန်ကန်သောအရောင်နှင့်အတူမြို့ '' ပန်းချီ '' ခဲ့သေချာအောင်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်ကို virtual 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုမှန်ကန်နှင့် 50 ရာခိုင်နှုန်းကတည်းကကျနော်တို့တင်ဆက်ပြသခံရမဆိုမြေပုံဂရပ်ဖစ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအမှတ်အသားများထားတော်မူ၏။ မြေပုံ၏ဘေးထွက်မှကျနော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ '' မျက်နှာများနှင့်သူတို့အနိုင်ရမဲအရေအတွက်ကနှင့်အတူအပိုဆောင်းဂရပ်ဖစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နဲ့ post အတွက်ပြင်ဆင်ချက်လုပ်မပေးနိုငျအထူးသဖြင့်အခါ, ထိုအခွင့်ရဖို့ကြီးမားတဲ့တာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Ultimatte အဆိုပါတင်ဆက်ချောမွေ့စွာပွင့်လင်းအရာဝတ္ထုနောက်ကွယ်မှရပ်များနှင့်ပြဿနာမရှိဘဲသူတို့အားပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ကြကုန်အံ့။ "
ထို့အပြင် ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုအဆိုပါထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် powering HD။ wTVision ကွဲပြားခြားနားသောကင်မရာကိုထောင့်စောင့်ကြည့်ပြီးစည်းချက်ပျောက်ဆုံးမပါဘဲရိုက်ချက်များအကြားချောချောမွေ့မွေ့အကူးအပြောင်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။ "ရွေးကောက်ပွဲကအရမ်းပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရဲ့ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအဖြစ်ကောင်းစွာကြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်နေခဲ့ရတယ်။ အဆိုပါသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်, သေးကျစ်လစ်သိပ်သည်း ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို HD ကျနော်တို့လိုအပ်အတိအကျဘာဖြစ်သက်သေပြပြီးပို။ ငါတို့ထုံးစံဂရပ်ဖစ်, အစိမ်းရောင် screen နှင့်တစ်နေရာတည်းတွင်ရှိသမျှသည်အခြားသောဒြပ်စင်များကြည့်ဖို့အတှကျဘက်ပေါင်းစုံပေါင်းစုံအမြင်နှင့်အတူ, ကလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်, "Kossowski ကဆက်ပြောသည်။
wTVision ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာထွက်ရှာနိုင်ပါတယ်လေကြောင်းဂရပ်ဖစ်များနှင့် AR အပေါ်အတှကျအသုံးပွုခဲ့လေးခု Decklink ကို Quad2ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ကတ်များခဲ့ကြသည်။ နှစျခု UltraStudio HD Mini ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ထုတ်ကုန်များကိုလည်းဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်အတွက်ကင်မရာဘောင်နှောင့်နှေးစေရန် input ကိုနှင့် output ကိုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်များနှင့်ထို့ထက် ပို. နှစ်ခုလုံးကိုဂရပ်ဖစ်ထပ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အကွိမျမြားစှာ Micro နဲ့ converter BiDirectional SDI /HDMI တစ်ဦး Teranex Mini ကို SDI ဖြန့်ဖြူး 12G စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဘို့အစီအစဉ်ကိုအစာကျွေးခြင်းဖြန့်ဖြူးအတွက်အသုံးပြုနေစဉ်, ရှိသမျှအချက်ပြမှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်ဗီဒီယိုများကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
"ဒါဟာဆက်ဆက်ငါအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အရှိဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ကျိန်းသေကြီးမားသောတာဝန်များထဲမှဖြစ်ပါတယ်," Kossowski ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ "ရွေးကောက်ပွဲကိုနှင့်အတူ, သငျသညျအမှားအဘို့အချိန်မရှိဘူးအဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ခြင်းနေချိန်မှာအချိန်မီထုံးစံ၌ updates များကိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါကထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းမည်သည့်အချက်မှာငါ့ကိုကျရှုံးမဟုတ်ဘူး သိ. ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းဂီယာလိုအပ်, ငါကျနော်တို့နှင့်အတူအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကိုသိ Blackmagic ဒီဇိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာ supporting ။ "
Ultimatte, ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို၏ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများ HD, DeckLink ကို Quad 2, Micro နဲ့ Converter BiDirectional SDI /HDMI, UltraStudio HD Mini ကို, Teranex Mini ကို SDI ဖြန့်ဖြူး 12G အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအ Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
wTVision software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒီဇိုင်းပေါ်အခြေခံပြီးဘက်ပေါင်းစုံအသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစစ်ဆင်ရေးနှင့်အထူးပြုလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပြင်ပဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွက်အဓိကအစစ်အမှန်အချိန်ဂရပ်ဖစ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောလယ်ကွင်းအနှံ့က၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပြည့်စုံသောအသိပညာကြောင့်ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်ပံ့ပိုးပေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သေးငယ်တဲ့တစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ကနေကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အရေးအပါဆုံးပြိုင်ပွဲအချို့ကိုရန်, wTVision နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်လွှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတွင်းအစိတ်အပိုင်းကိုယူပြီးထက်ပို 60 နိုင်ငံများတွင်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်။ wTVision ရဲ့အားကစားများအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများ, ရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံ, ဖျော်ဖြေရေးပွဲများနှင့်ထိပ်တန်းသတင်းနေကြတယ်, အတူတူက၎င်း၏မာစတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အဓိကတီဗီနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ၏ဦးစားပေးရှေးခယျြမှုနှငျ့အတူ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန် Blackmagic ဒီဇိုင်း blackmagic ဒီဇိုင်း ultimatte ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပနားမားရွေးကောက်ပွဲ post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် wTvision 2019-08-13
ယခင်: ပြကွက်တွင် podcast လပ်ြရြားမြ 2019
နောက်တစ်ခု: Porsche ရဲ့ဒေါင်လိုက်ကြော်ငြာကင်ပိန်းများအတွက်ကိုလိုနီသိမ်းသွင်း ထား. နှစ်ဦး Telly ဆုပေးပွဲ